पार्टी एकता जोगाउनको लागि नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन [अन्तर्वार्ता] « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
२० मंसिर २०७८, सोमबार । December 6, 2021
जनतालाई दु:ख दिएर कांग्रेसले महाधिवेशनमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैन : प्रधानमन्त्री देउवा
सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले बोलायो साधारणसभा
प्रदर्शनकारीमाथि चलायो म्यानमारको सेनाले ट्रक, पाँचको मृत्यु, दर्जनौं घाइते
पार्टी एकता जोगाउनको लागि नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन [अन्तर्वार्ता]
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन नयाँ नेतृत्व आउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी मंसिर १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुँदै छ । महाधिवेशनको तयारी, वर्तमान राजनीतिक परिपेक्षमा राप्रपाको भूमिका, एमसीसी, आगामी चुनाव लगायत देशको समसामयीक विषयमा अनलाइनपानाकर्मी रामनाथ कुँवरले नेता लिङ्देनसंग गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश :
राष्ट्रिय प्रजातन्त्रक पार्टीको महाधिवेशनको तयारी कस्तो हुँदैछ ?
हाम्रो पार्टीको महाधीवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षहरू पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया आजदेखि सुरु भएको छ ।
महाधिवेशनमा तपाईको उमेदवारी कुन पदमा दिनुहुन्छ ?
हाम्रो यस विषयमा छलफल भैरहेको छ । हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रक पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आउन पर्छ भन्ने पक्षमा छौं । नयाँ निति कार्यक्रमबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले आगामी २—३ दिनमा कुन पदमा कसले उमेदवारी दिने भनेर टुंगो लगाउँछौं । मैले अध्यक्षमा उमेदवारी दिने सम्भावना कायमै छ । साथीहरुसंग यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।
राप्रपा एकता हुने र फुट्ने पटक—पटक भैरहेको छ । यो महाधिवेशनपछि फेरि पार्टी फुट्ने सम्भावना छ नी के भन्नुहुन्छ ?
अब पार्टी विलकुलै फुट्दैन । पार्टीलाई फुट्नबाट बचाउनलाई नै नयाँ नेतृत्व ल्याउने हो । शिर्ष नेताहरु कमल थापा, पशुपति शमसेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनी तीन जना मध्ये एक जना अध्यक्षहुँदा अरुले पार्टी फुटाउने खतरालाई चिर्न नै हामी नयाँ नेतृत्व आउन खोजेका हौं । नयाँ नेतृत्व आएपछि यो पक्ष, त्यो पक्ष भन्ने रहँदैन, त्यसैले म अब पार्टी विभाजन नहुने विस्वास सबैलाई दिन चाहान्छु ।
महाधिवेशनपछि राप्रपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो भूमिका खेल्छ ?
हाम्रो पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदय र विकास हुन्छ । खासगरी कांग्रेस, कम्यूनिस्टहरुको कृयाकलापबाट निरास भएका जनतालाई नयाँ उत्साह र प्रेरणा प्रदान गर्छ । जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्, विकल्प प्रदान गर्छ र अन्तत यो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा मुख्य पार्टीको रुपमा विकास हुन्छ ।
पछिल्लो समयको राजनीतिक गतिविधिहरुमा राप्रपा मौन बसेको, जनताको पक्षमा नबोलेको भन्ने छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो सत्य हो । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु आफू बरबाद भएको मात्र होइन देशलाईनै बरबादी बनाएको बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडक कब्जा गरेको अवस्था हुन पर्थ्यो । तर नेतृत्वको ठिक निति कार्यक्रम नभएकोले, ठिक ढंगले नेतृत्वले कार्यक्रम ल्याउन नसकेको कारण आज हाम्रो पार्टी भूमिका विहिन बनेको छ । राप्रपाले केही नगरेको मात्रै होइन राप्रपा नै छ—छैन जस्तो अवस्थामा पुगेको अवस्था छ । त्यसैले राप्रपाको यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीले नयाँ नेतृत्वको कुरा गरेको हो ।
एमसीसीको विषयमा के भन्नु हुन्छ ? पारित गर्ने वा फिर्ता गर्ने ?
एमसीसीले आज देशलाई नै विभाजित गरेको छ । नेपाली जनता नै पक्ष र विपक्षमा बोल्न थालेका छन् । ५५ अर्ब ठुलो कुरा होइन, जुन अनुदान लिदा हाम्रो देश विभाजन हुन्छ, जनता विभाजित हुन्छन् भने त्यस्तो अनुदान लिन हुँदैन । त्यो त अनुदान पनि कस्तो भन्दा लिनेलाई भन्दा दिनेलाई हतार छ । ५५ अर्ब राष्ट्रिय एकताको अगाडि केही पनि होइन । ४६ सालपछिका उच्च पदमा पुगेका नेताहरुको सम्पती छानबीन गर्ने हो भने त्यस्तो ५५ अर्ब भन्दा धेरै आउँछ । त्यसकारणले यो लिन पर्दैन । एमसीसी फिर्ता गर्दा अमेरीका र नेपालको सम्बन्ध विग्रिन्छ भन्ने कुरा सुनिएको छ । यो नितान्त गलत कुरा हो । एमसीसी सम्झौता नगर्ने विश्वमा धेरै देशहरु छन् । ती देशहरुको सम्बन्ध अमेरीकासंग विग्रेको छैन् । त्यसैले यो राष्ट्रिय हितमा छैन्, फिर्ता गर्नुपर्छ ।
अदालतको विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
यो अदालतको विवाद केवल एउटा प्रधानन्यायाधिशको राजिनामासंग मात्रै सम्बन्धीत कुरा होइन । यसले देशको समग्र प्रणाली नै असफल भएको कुराको संकेत गर्छ । त्यसकारण प्रधानन्यायाधिशको राजिनामा मात्रै समस्याको समधान होइन, समग्र प्रणालीमा पुनाराबलोकन गर्ने बेला आएको छ । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
आगामी निर्वाचनमा राप्रपा एक्लै होमिन्छ कि गठबन्धन गरेर जान्छ ?
यस विषयमा हामी पार्टीमा छलफल गर्ने नै छौं । मेरो व्यक्तिगत धारणा अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी निर्वाचनमा कुनै गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लडेर आफ्नो हैसियत स्थापित गरेर जानुपर्छ । १ सय ६५ क्षेत्रमा नै आफ्नै उमेदवारहरु उठाउनुपर्छ ।
राप्रपाको निर्वाचनमा जानका लागि मुख्य—मुख्य यजेण्डा के—के हुन्छ ?
यो कुरा त सबैलाई सर्वविधितै छ । राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र पुनरस्थापना, संघीयताको खारेजी, स्वदेशमै युवालाई रोजगारी, भ्रष्टचार मुक्त समाज, भौतिक पूर्वाधारहरुको द्रुत विकास जस्ता एजेण्डाहरु लिएर हामी जाने छौं ।
प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७८, सोमबार ६ : ४५ बजे
“कांग्रेसलाई जनतामुखी र गतिशील बनाउन मेरो उम्मेदवारी” : आशिष शर्मा [अन्तर्वार्ता]
“गरिब किसान मजदुरहरूलाई समृद्धिमा जोड्न मेराे उमेदवारी” : कुन्दनराज काफ्ले [अन्तर्वार्ता]
“कम्युनिस्ट सरकारले संविधानलाई कुल्चेको थियो तर कांग्रेसले रक्षा गर्‍यो”: प्रतिमा गौतम [अन्तर्वार्ता]
प्रभु बैंकको ब्राण्ड म्बास्डरमा पुन: कलाकार प्रकाश सपूत नियुक्त